Gobolka Kandiyohi DFL
Minnesota DFL waxay leedahay taariikh hodan ah oo ay ku doortaan hoggaamiyeyaal xoog leh, horusocod ku ah xafiiska dadweynaha. Waxaan maalin walba ka shaqeynaa sidii aan u dhisi lahayn Minnesota ka wanaagsan dhammaan reer Minnesota.
The Kandiyohi County DFL waxay u heellan tahay inay u doorto musharrixiinta xoogga leh ee DFL xafiisyada dawladda, iyagoo u dhaqmaya sidii codka dadweynaha gobolkeenna, iyo inay ku dhiirrigeliyaan dhammaan muwaadiniinta inay noqdaan kuwo firfircoon oo siyaasadeed bulshada dhexdeeda Annaga oo ah unug maxalli ah, waxaan taageernaa oo aan ka shaqeynaa dejinta himilooyinka iyo mabaadi'da Xisbiga Dimuqraadiga ah waxaanna ku dadaalaynaa inaan sii wadno aasaaska taariikhda aasaasiga ee Xisbigeenna. Akhriso si aad waxbadan ubarato.
Ka Qaybgal Kulan
Kulamada waxaa laqabtaa Talaadada Koowaad ee bil walba 5:30 galabnimo!
Ku hel xiriirka Zoom adoo u diraya emailka contact@kandiyohidemocrats.org ama ku soo biir joornaalkayaga.
Ugu deeqo Kandiyohi County DFL
Wax ku biirintaadu waxay taageertaa tababarada, boosta, boorarka, calaamadaha cawska, iyo taageerada musharixiinta maxalliga ah. U qalma $ 50 soo celinta barnaamijka Minnesota PCR . Ugu deeqo si ammaan ah oo elektaroonig ah adoo adeegsanaya ActBlue .
Degmada Kandiyohi DFL waxay ka shaqeyneysaa sidii ay u dhisi lahayd jawi taageero iyo kheyraad waxtar leh si loo hubiyo inaan dooranno hoggaan dimuqraadi ah dhammaan degmooyinkeenna iyo gobolkeenna. Waxaan ka wada shaqeynaa sidii aan bulshadeenna u wanaajin lahayn, iskaashiguna mar walba waa mudnaanta. Xafiiskayaga istaag oo salaam!
Isn, Lul 04
Lul 04 ee 10:00 GH
Kulanka bilaha ah
Tldo, Lul 05
Lul 05 ee 5:30 GD – 7:00 GD
Soo dhaweyn, 324 3rd St SW, Willmar, MN 56201, USA
Sbti, Lul 16
Lul 16 ee 10:00 GH
Arbc, Ogs 10
Ogs 10 ee 10:30 GH – Ogs 13 ee 10:00 GD
Tldo, Nof 08
Nof 08 ee 7:00 GH – Nof 09 ee 8:00 GD
Ka Qayb Qaado!
Nagala kulan dhacdooyinka maxalliga ah, na taageer musharraxiinta maxalliga ah, nala shaqee tabaruca, ka soo qaybgal shirarka, iyo inbadan.
Kulamada billaha ah ee Degmada Kandiyohi ee DFL waxaa laqabtaa Talaadada ugu horeysa bisha markay tahay 5:30 pm galabnimo. Isku qor xiriiriyaha Zoom adoo gudbinaya foomka.